PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: July 2009
ဒေါ်လာရရင် အကုန်လုပ် နအဖရဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ် - အပိုင်း...
မစ္စတာခရီယေတာ - “စစ်အစိုးရသို့ ကုလသမဂ္ဂ၏ ရှုတ်ချခန်း”...
အာဇာနည်ဗိမာန် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၉၈၃၊ အောက်တိုဘာ ၉ ရက်)
Credit By: ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ
PNS – Japan ဆိုတာက Palaung National Society(Japan) ပလောင်အမျိုးသားအဖွဲ့ (ဂျပန်)ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ ပေါ်ပေါက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကို စွန့်ခွာကာ နိုင်ငံတကာသို့ အသီးသီးရောက်ရှိကြပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံသို့လည်း မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိကြသော မြန်မာနိုင်ငံသားများတွင် နိုင်ငံရေးသမားများ ဘ၀လုံခြုံမှုအတွက် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရင်းနှင့် ရောက်ရှိနေသူများ၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီး ၀င်ငွေရှာလိုသူများ အမျိုးမျိုးကို တွေ့ရှိကြရပါသည်။
ကျွန်တော်သည် ပလောင်အမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၁၉၉၉ ခုနှစ် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသော ပလောင်အမျိုးသား အဖွဲ့အစည်းဟူ၍ မရှိသေးပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်သည် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုများ တွင် ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရှိသော အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများ၏ လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (PSLA) ဗဟိုဌာနချုပ်နှင့် အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ပြီး ဗဟိုမှ အဆက်အသွယ်ဖြင့် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဒေသ အခြေစိုက် ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး (PSLF) ဗဟိုနှင့် ပြန်လည် အဆက်အသွယ်ရရှိခဲ့ပါသည်။ (PSLF) ဗဟိုမှ တာဝန်ပေးချက်အရ (PSLF) ၏ နိုင်ငံခြားရေး တာဝန်ခံဂျပန်ဌာနကို တာဝန်ယူပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ မေ ၂၃ ရက်နေ့ နေ့စွဲပါစာဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု (NDF) ဗဟိုဌာနချုပ်မှ တပ်ပေါင်းစုကိုယ်စား NDF ဂျပန်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၌ မြန်မာ့ရေးရာရုံး Burma Office (BOJ) စတင်ဖွင့်လှစ်တည်ထောင်စဉ် ဂျပန်ရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ နှင့်အတူ NDF ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဦးဆောင်ကော်မတီတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်အခါက မြန်မာ့ရေးရာရုံးတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်းများမှာ NLD-LA (JB), LDB, FTUB, NDF, PFB, RENGO တို့ဖြင့် ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီးအရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
ထိုအချိန်တွင် ပလောင်အမျိုးသားများ၏ အရေးကိစ္စများကို ဂျပန်နိုင်ငံတွင် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ရန် လူပုဂ္ဂိုလ် ကိုယ်စားလှယ်မရှိသေးသောကြောင့် ပလောင်အမျိုးသားများကိုယ်စား မှန်ကန်စွာ ကိုယ်စားပြုရပ်တည်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် မလွဲမသွေ လိုအပ်လျက်ရှိသည်ဟု ခံယူပါသည်။ အဆိုပါလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် ပလောင် အမျိုးသားတစ်ဦး၏ မွေးရာပါ အခွင့်အရေး တစ်ရပ်ဖြစ်သည်ဟု ခံယူသည်။ နောင်အနာဂါတ်တွင် ပလောင် အမျိုးသားများ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ပိုမိုရောက်ရှိလာပါက လိုအပ်လာမည်ဖြစ်သော ပလောင်အဖွဲ့အစည်းအတွက် ပလောင်အမျိုးသားအဖွဲ့ သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာကြသော တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများသည်လည်း ဘ၀တူ ခံစားချက်တူ စိတ်သဘောတူ ဖွဲ့စည်းထားသည့် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ရပ် ဂျပန်တွင် မလွဲမသွေ ပေါ်ပေါက်ရန် လိုအပ်သည်ဟု အခိုင်အမာ ယုံကြည်သည်။ ထို့ကြောင့် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ အကြိမ်ကြိမ် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးနောက် မိမိအမျိုးသားကိုယ်စား ရပ်တည်ပြီး ညီညွှတ်သော တိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ အစည်း (ဂျပန်) Association of United Nationalities in(Japan)ကို၂၀၀၃ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ (၂၁)ရက်နေ့ တွင် စတင်ဖွဲ့ စည်းတည်ထောင် ခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ တွင် ပလောင်အမျိုးသားများအဖွဲ့ (ဂျပန်) Palaung National Society(Japan) PNS-Japan ကို စတင်ဖွဲ့ စည်းခဲ့ပြီး ညီညွှတ်သောတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ အစည်း (ဂျပန်) တွင် ပလောင်အမျိုးသား ကိုယ်စား တာဝန်ယူ ရပ်တည်လာခဲ့ပါသည်။
PNS – Japan ၏ ရည်ရွယ်ချက်။
(၁) ပလောင်အမျိုးသားများ၏ စာပေ နှင့် ယဉ်ကျေးမှု ကို ဖေါ်ဆောင်ရန်။
(၂) မြန်မာနိူင်ငံသားတိုင်း လူ့ အခွင့်အရေးပြည့်ဝစွာခံစားခွင့်ရရှိရေးနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရန်။
(၃) နအဖ စစ်အုပ်စုရဲ့ လူအခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုတွေ၊ဖိနှိပ်မှုတွေကို နိူင်ငံတကာသိအောင် ဖေါ်ထုတ်တင်ပြသွားပြီး၊ပြည်ပ၌ ဒုက္ခရောက်နေကြသော မြန်မာနိူင်ငံသားများကို အတတ်နိူင်ဆုံး ကူညီပံ့ပိုးမှုပြုလုပ်နိူင်ရန်။
(၄) နိူင်ငံတကာရောက်ရှိနေကြသော တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ အစည်းအချင်းချင်း အသိအမြင်ဖလှယ်ပြီး နိုင်ငံရေးအရ စည်းလုံးညီညွတ်မှုရရှိရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။
(၅) အမိမြန်မာနိူင်ငံမှာ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးနှင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ် လုံးဝချုပ်ငြိမ်းရေး အတွက် ဂျပန်ရောက် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများ နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် တို့ ဖြစ်ပါသည်။
PNS – Japan ကို ဆက်သွယ်လိုလျှင်
2 – 24 – 8 mazonemashuukaku-bld Moom No-(303)
Higashi Ikebukuro, Toshimaku,Tokyo . Japan
Phone Fax, 03 5960 4440
Mobile 090 9831 7192
ဆရာမြင့်ရဲ့ ဆောင်းပါး အပိုင်း(၂) ကို ကျွန်တော် ကိုဖိုးတရုတ်မှ ဆက်လက်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အခက်အခဲတွေကြားထဲက ဆောင်းပါးပေးပို့လာတဲ့ ဆရာမြင့်ကိုလည်း ကျွန်တော် ကိုဖိုးတရုတ်မှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အား ဘာလော့ဂ်မှာ မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်။ ဂျပန်ယာကူဇာ ကွန်ယက်အတွင်းမှ Middle Class Businessman ကို အလျင် ဦးဆုံးအနေဖြင့် ကိုတေဇနဲ့ တွေ့ဆုံစေပြီးမှ Dive Money US$2million ကို နအဖလေတပ် ရဟတ်ယာဉ် အပိုပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူတင်သွင်းရေး လုပ်ငန်းတွင် ဂျပန်ယာကူဇာ ကွန်ယက်ဘက်မှ လွှဲပြောင်းပေးမဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို အသေးစိတ် ရှင်းပြဆွေးနွေးစေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူများနဲ့ အပြီးသတ် မဆွေးနွေးရသေးခင်မှာ အလယ်အလတ်အဆင့် တာဝန်ခံတစ်ဦး (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် အခြေခံအားဖြင့် နှစ်ဘက် သဘောတူညီမှု ရရှိအောင် ရှေ့ပြေးတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးစေခြင်းဟာ ဂျပန်ယာကူဇာတို့၏ လုပ်နည်းလုပ်ဟန် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Mr. Tanaka ကို ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ ခွန်ဆာ၏ လူယုံတပ်မှူး ဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းလူးကိုယ်တိုင် သွားရောက် ကြိုဆိုပြီး အင်ယားလိပ် ဟော်တယ်မှာ တည်းခိုစေခဲ့ပါတယ်။ သူ၏ ရန်ကုန်သို့ လာရောက်သည့် ခရီးစဉ်အား ခွန်ဆာ၏ ညွှန်ကြားချက်အရ စစ်ထောက်လှမ်းရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးမှ လှမ်း(၁) ဌာနကြီးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်သိန်းနဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီး စန်းပွင့်တို့ကို ဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းလူးက ကြိုတင် အသိပေးထားခဲ့ပါတယ်။ ကိုတေဇဘက်ကလည်း လေတပ်ဦးစီးချုပ်ကို နှုတ်အားဖြင့် ကြိုတင်အသိပေးထားခဲ့ပါတယ်။ စစ်ထောက်လှမ်းရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၏ နောက်ကွယ်မှ ကြိုတင်စီစဉ်ပေးချက်အရ အမှတ်(၂) တပ်မတော်ဧည့်ရိပ်သာမှာ ခွန်ဆာဟာ Mr.Tanaka နဲ့ ကိုတေဇ တို့ကို မိတ်ဆက်သဘော တွေ့ဆုံပေးခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ငန်းအသေးစိတ်ကိစ္စတွေကို ရန်ကုန်ပြည်လမ်း (၆)မိုင်မှာ ရှိတဲ့ ကိုတေဇရဲ့ Htoo Trading Co,Ltd အဆောက်အဦး ဆင်ဝင်အပေါ်ထပ်မှာ ရှိတဲ့ ကိုတေဇရဲ့ ရုံးခန်းမှာ ဆက်လက်ဆွေးနွေးခြဲ့ကပါတယ်။ အဲဒီလို အသေးစိတ် ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြရာမှာ ကိုတေဇရဲ့ အကိုဖြစ်သူ ကိုသီဟ ( Htoo Trading Co,Ltd ၏ ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ ငွေစာရင်း ဒါရိုက်တာ) လည်း ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြရာမှာ ဦးစွာ ပထမ Mr.Tanaka က ကိုတေဇရဲ့ စင်ကာပူမှာ ရှိတဲ့ OCBC Bank မှာ လုပ်ငန်း လည်ပတ်နေတဲ့ အထောက်အထားများ၊ Bank Documents များကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေး မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ Mr.Tanaka က Dive Money US$2million ကို လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ရေးအတွက် နအဖ အစိုးရ စီစဉ်ပေးမှုနဲ့ ရေနက်ကွင်း ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းပြထားတဲ့ Loan Proposal တင်ပြရန်နဲ့ အဆိုပါ Loan Proposal တွင် Cash Flow Requirements များပါ ထည့်သွင်းရေးဆွဲပေးရန် တိုက်တွန်းပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။ ၄င်းက ဆက်လက်ပြီး လုပ်ငန်းပြ Proposal ၏ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ Business Loan အနေဖြင့် ယာကူဇာပိုင် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု လုပ်ငန်းပြ ကုမ္ပဏီဘက်မှ Business Loan အနေဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးမည် ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ငွေလွှဲပြောင်းပေးနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ Bank Guarantee ကိစ္စများကို သူတို့ ဂျပန်ဘက်မှ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ကိုတေဇတို့ဘက်က Loan Proposal ကို မြန်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး တင်ပြပါက ဂျပန်ဘက်မှ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည့် ကိစ္စများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင် သွားမည်ဟု ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ Dive Money US$2million ကို ယာကူဇာလုပ်ငန်း ကွန်ယက်ဘက်မှ ၀ိနည်းလွတ်ဆောင်ရွက်သည့် အနေဖြင့် ဟောင်ကောင်ရှိ HSBC ဘဏ်မှ Zencard Finance Industry အမည်ဖြင့် စကာင်္ပူ OCBC ဘဏ်ရှိ ကိုတေဇဘဏ်စာရင်းများ သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ယခုကဲ့သို့ လေတပ်လိုအပ်ချက် ရဟတ်ယာဉ်အပိုပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူတင်သွင်းရန် လွဲပြောင်းပေးမည့် ဒေါ်လာ (၂) သန်းသည်လုပ်ငန်းစတင်သည့် First Package Transfer ဖြစ်နေသဖြင့် အရေးကြီးကြောင်း၊ ပထမတဆင့် အလုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ငန်းစတင်နိုင်ပါက Second Package Transfer ,Third Package Transfer များ အဆင်ပြေလွယ်ကူနိုင်သဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန်လည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ Mr.Tanaka ဟာ ရန်ကုန်အခြေစိုက် ဂျပန်ကုန်သွယ်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်း ရုံးခွဲများဖြစ်ကြတဲ့ Nichimen Corportion မှ အထွေထွေ မန်နေဂျာများ ဖြစ်သူ Mr.Y.Kondo, Mr.K.Susa နဲ့ Marubeni Corporation ရဲ့ ရန်ကုန်ရုံးခွဲ မန်နေဂျာ Mr.KojiIjiri တို့နှင့်ပါ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းများအတွက် လုပ်ငန်းသုံး အကြီးစား စက်ကိရိယာ ပစ္စည်းများ၊ ဘိလပ်မြေနဲ့ ပိုးသတ်ဆေးများအပြင် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းတွေကို Differed Payment System နဲ့ တင်သွင်းရေးတို့ကိုပါ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဟောင်ကောင်ရှိ HSBC ဘဏ် အဆောက်အဦး
အဲဒီအချိန်ကာလ (၂၀၀၀-၂၀၀၁)ခုနှစ်က ကိုတေဇရဲ့ ထူးကုမ္ပဏီဟာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်နဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း Myanmar Billion Group အမည်နဲ့ ရေနက်ကွင်း စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကွက်တွေ ဖော်ထုတ်နေတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးအောင်ကိုဝင်းခေါ် ဆရာကျောင်း (ကမ္ဘောဇဘဏ်)ရယ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရွှေမန်းရဲ့ သားအကြီးဖြစ်တဲ့ အောင်သက်မန်း (ဧရာရွှေဝါ ကုမ္ပဏီ)နဲ့ ဦးဇော်မင်းခေါ် ဦးလှ (မိုးကုတ်ပတ္တမြားတွင်း ပိုင်ရှင်နဲ့ ကျောက်မျက်ကုန်သည်) တို့ဟာလည်း ပူးပေါင်းလျက် လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။ Mr.Tanaka က တင်ပြရန် တောင်းဆိုလာတဲ့ Loan Proposal ကို ကိုတေဇနဲ့ ကိုသီဟ တို့ဟာ Myanmar Billion Group အမည်နဲ့ ရေနက်ကွင်း ဖော်ထုတ်ရေး ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုလုပ်ငန်းမှာ အကြီးစား စက်ယန္တယားများ ၀ယ်ယူရန်အတွက် ဒေါ်လာ ငွေတွေ လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်း Cash Flow များနှင့်တကွ နိုင်ငံတကာ ဘဏ်များနှင့် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ ဘောင်ဝင် အောင် စင်ကာပူမှာ ဘဏ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူ တွေကို လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခ ပေးကာ Loan Proposal ကို ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ ကိုတေဇကိုယ်တိုင် ဂျပန်ကို သွားရောက်ပြီး Loan Proposal ကို Mr.Tanaka ထံ တင်ပြခဲ့ပြီး တိုကျိုမြို့ Okuya Hotel မှာ Mr.Tanaka အပါအ၀င် ယာကူဇာလုပ်ငန်းကွန်ယက်မှ ထိပ်ပိုင်း တာဝန်ခံများဖြစ်ကြတဲ့ Mr.Matsushima, Mr,Habara နဲ့ Mr.Chinonae စတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်အမည်ခံ ယာကူဇာ အကြီးစားတွေနဲ့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ခွန်ဆာရဲ့ ထောက်ခံတင်ပြချက်နဲ့ ကိုတေဇရဲ့ လျင်မြန်ပါးနပ်တဲ့ Business Performace တို့ကို ယာကူဇာတွေက အကဲဖြတ်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၀ ခုနစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း ဂျပန်ယာကူဇာ လုပ်ငန်းကွန်ယက်ရဲ့ အမည်ခံ လုပ်ငန်းများမှ Business Loan အမည်ခံ အရေခြုံထားတဲ့ Dive Money US$2million သည် ကိုတေဇရဲ့ စင်ကာပူ OCBC ဘဏ် စာရင်းသို့ ဟောင်ကောင် HSBC ဘဏ်မှ တဆင့် လွှဲပြောင်းလက်ခံရရှိပြီး နအဖလေတပ်ရဲ့ ရဟတ်ယာဉ်များ အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ စက်အပိုပစ္စည်း ဒေါ်လာ (၂) သန်းဖိုးကို ၀ယ်ယူတင်သွင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုတေဇရဲ့ လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီခွဲဖြစ်တဲ့ Myanmar Avia Export နဲ့ နအဖတို့အကြား Differed Payment System ဖြင့် ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် သဘောတူ ကန်ထရိုက်စာချုပ် လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ နအဖရဲ့ အစိုးရ ဘတ်ဂျက်မှ အရစ်ကျ ပြန်ဆပ်ငွေတွေကို ကိုတေဇမှ တဆင့် ဂျပန်ယာကူဇာများရဲ့ အမည်ခံလုပ်ငန်းများသို့ ငွေဖြူအဖြစ် ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ စစ်လက်နက် ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူခြင်းနဲ့ ငွေလွှဲပြောင်းခြင်းမှ ကော်မရှင် ပွဲခများစွာ ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ နအဖရဲ့ စစ်လက်နက် ပစ္စည်း ၀ယ်ယူရေးအစီအစဉ်နဲ့ ဂျပန်ယာကူဇာ အုပ်စုရဲ့ Dive Money များ အကျိုးတူ ဆက်သွယ် ချိတ်ဆက်မိကြ တဲ့အကြောင်း စာဖတ်သူများကို ဗဟုသုတရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပြီးပေးပို့ လိုက်ရပါတယ်။
ဦးတေဇနဲ့ Mr.Tanaka တို့ ဂျပန်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့သော Okuya Hotel မြင်ကွင်း
Credit By: http://drlunswe.blogspot.com
2001 ခုနှစ် ဂျပန် သတင်းမီဒီယာ များကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသားအရေး
Foreign Coresspondents’s Club Japan
ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ
15:00 – 15:10 Dr. Min Nyo Thanking to RENGO for providing
(President, League for office space of Burma Office(Japan),
Democracy in Burma and Request to review Japanese Foreign
Office Director, Burma Policy towards Burma and
Office – Japan) suggestion to help Thai – Burma
15:10 – 15:20 Ye Htut Situation of Political Prisoners in
(Vice President, National Burma and Update National League
League for Democracy- for Democracy Party in Burma
15:20 – 15:30 Saw David Htaw and Federalism and equality of ethnic
Kyaw Oo (National peoples in Burma
15:30 – 15:40 Dr. Thaung Htun UN agencies, latest into of UNGRC
(Rep. For UN Affairs, related Burma, NCGUB (Burma UN
National Coalition Service Office) and role of the
Government of the special rapportuer
Union of Burma)
15:40 – 15:50 Tin Win (Federation of Request to Japanese Government
Trade Unions – Burma, to review the consideration of
Japan Branch) and offering large scale ODA to
Saw Ohnmar (Former Burmese Military Regime
Deputy Planning Officer,
15:50 – 16:00 Maung Maung Forced Labor practice still existing
(General Secretary in Burma after imposing sanotions
Federation of Trade of ILO
Unions – Burma)
16:00 – 17:00 Q & A time.
NDF ကိုယ်စားလှယ် မိုင်ကျော်ဦးမှ
ဂျပန် သတင်းမီဒီယာ များကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသားအရေး
ကျွန်တော်သည် (p.s.l.f) ပလောင်ပြည်နည် လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး၏ တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ယခု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု (NDF) ဂျပန်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအဖြစ်လည်း တာဝန်ယူလျက်ရှိပါသည်။ NDF ကို ၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ မေ (10)ရက်နေ့မှာ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ NDF ကို လူမျိုးရေးသာမက လူတန်းစားအရပါ ဖိနှိပ်ခံရသည့် လူစုငယ်များဖြစ်ကြသော ကရင်၊ ကရင်နီ၊ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်း၊ ရခိုင်၊ မွန်၊ ပအိုဝ်း၊ ပလောင်၊ ၀၊ လားဟူ စသည့်လူမျိုးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသည် ဂျပန်နိုင်ငံကဲ့သို့ လူမျိုးစုတစ်မျိုးသည့် နေထိုင်သည့် လူ့အဖွဲ့အစည်း (HO MO GENIOUS SOCIETY) မဟုတ်ဘဲ လူမျိုးစုအများအပြားနေထိုင်သည့် (HI TRO GENIOUS SOCIETY) တစ်ခုဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသော အကြပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်ရေးနှင့် စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ (GENUINE EDERATED UNION) ဖွဲ့စည်းရေးသည်သာ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် တိုင်းရင်းသား အရေးသည် ဒင်းဂါးပြား၏ ခေါင်းနှင့်ပန်းကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။
NDF သည် အမျိုးသားတန်းတူရေး၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရေးနှင့် စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးအတွက် အဓိက လုပ်ဆောင် လျက်ရှိပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ ဆုံးဖြတ် ထောက်ခံထားသည်သာမက ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကလည်း သဘောတူထားသည့် (သုံးပွင့်ဆိုင်)ဆွေးနွေးပွဲကိုလည်း အပြည့်အ၀ ထောက်ခံပါသည်။ ထိုသုံးပွင့်ဆိုင်အဖွဲ့မှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့် နအဖစစ်အစိုးရတို့ဖြစ်ပါသည်။ လူမျိုးစုများ၏ အဓိကတောင်းဆိုနေသည်မှာ လူမျိုးခွဲခြားရေးနှင့် လူမျိုးမုန်းတီးရေး မဟုတ်ဘဲ လူမျိုးစုအားလုံး ပြည်ထောင်စုအတွင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူတကွ နေထိုင်ရေးသာဖြစ်သည်။ 1997 ခုနှစ်၊ ဇန်နာဝါရီလ 15 ရက်နေ့ ကော်သူလေးပြည်နယ် မယ်သဝေါ၌ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကြီးမှာ မူးခစ်ဆေးဝါး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချမှု လုပ်ငန်းအားလုံးကို ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရင် မူးယစ်ဆေးဝါး အဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားမည့်အကြောင်း တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ အားလုံး တညီတညွှတ်တည်း သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။
လွန်ခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလမှ စတင်ပြီး စစ်အစိုးရနှင့် ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ လျှို့ဝှက် စကားပြောနေသည့် ကိစ္စကို ကျွန်တော်တို့က ကြိုဆိုသော်လည်း ယင်းလျှို့ဝှက်စကားပြောဆိုမှုမှ တဆင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်သို့ ဦးတည် သွားရန် လိုအပ်လှပါသည်။ သို့သော် အဆိုပါ လျှို့ဝှက် စကားပြောဆိုခြင်းသည် လအတန်ကြာသည့်တိုင်အောင် ထင်ရှား တိုးတက်သော လက္ခဏာများကို မတွေ့ရဘဲ စစ်အစိုးရတစ်ဦး တည်းသာ လိုသလို သတင်းထုတ်ပြန်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖက်မှ ထုတ်ဖေါ် ပြောဆိုခွင့် မရရှိနေသည်ကို စိတ်ပျက် မိပါသည်။ စစ်အစိုးရသည် စစ်မှန်သော လိုက်လျောမှုများ မပြုလုပ်လိုသဖြင့် အချိန်ဆွဲပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အဖွဲ့အစည်းများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် ကြိုးစားနေသည်ဟု ထင်စရာအကြောင်းများ ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဂျပန်အစိုးရ အနေဖြင့် ယခုအခြေအနေကို အကဲဖြတ်မမှားရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ စစ်အစိုးရဖက်မှ ဒီမိုကရေစီအရေး၊ တိုင်းရင်းသား အရေးများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထင်ရှားသည့် အလျှော့ပေးမှုများ မပြုလုပ်လာမခြင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တစ်စုံးတစ်ရာ ထုတ်ဖေါ် ပြောဆိုမှု မရှိမခြင်း စစ်အစိုးရကို မည်သို့သော ထောက်ကူပြုမူ မှုများကို မပြုလုပ်ရန် လေးနက်စွာ တောင်းဆိုပါသည်။